Apha ungabona bukhoma ukumiliselwa kweHuawei Mate 20 kunye ne-20 Pro | Iindaba zeGajethi
Namhlanje lusuku lokumiliselwa kwaye ekugqibeleni siza kuba nakho ukubona ngokusesikweni imodeli entsha yeHuawei Mate, kule meko yimodeli yePro ye-20 kunye ne-20. Inkampani yaseTshayina imalunga nokwazisa abo bakhuphisana nabo abatsha ngePixel 3 XL, i-Samsung Galaxy Qaphela i-9 kwaye ekugqibeleni ezo smartphones ze Isikrini esikhulu ukuya kuthi ga kwi-intshi ye-6,9 njengaleyo iya kuba nayo iMate 20 Pro.
Ngamafutshane, ukuba awufuni kuphoswa yinkcazo-ntetho, ungahlala kweli nqaku linye njengoko siza kudibanisa ngqo kusasazo ngqo. Olu sasazo luza kuqala nge-13: 30 kwindawo yaseLondon, eya kuba ngu-5: 30 kusasa PST / 8:30 am EST, okanye ngo-7: 30 kusasa eMexico City.
Namhlanje sinoMiguel kumsitho oza kubanjelwa eLondon kwintetho yakhe, ke makhe sibone ukuba usixelela ntoni ukusuka kwinqanaba leqonga, kodwa kwabo bafuna ukubona le ntetho bukhoma, banokwenza oko kwisitishi se-YouTube sikaHuawei ukusukela nge-14: 30 emva kwemini, eli lixesha lokuba umboniso uzakuqala eLondon.
Kuyinyani ukuba ukuvuza kunye neenkcukacha ezivuzayo ezinje ngesizukulwane esitsha seprosesa yaseKirin 980 esiya kuthi sinyuse ezi zixhobo senza ukuba iintetho zenziwe zihluthwe ngokubhekisele kwizimanga, kodwa ingcebiso yeyokuba xa unexesha lokubona inqaku eliphambili leHuawei ngqo ngo-14: 40, hlala nathi ukuze ubone oku Umboniso weHuawei oza kuqala ngeyure nje ezinesiqingatha. Emva koko siya kuba nokubonakala kokuqala kunye nazo zonke iinkcukacha zeHuawei Mate 20 kunye ne-20 Pro ngqo eLondon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imiboniso » Apha ungabona bukhoma ukumiliselwa kwe-Huawei Mate 20 kunye ne-20 Pro